मेची सहकारीले धमाधम बनाउदै छ आकर्षक नमुना बस्ती, कस्ले बुकिङ गर्न पाउने ? - Pradesh Dainik
मेची सहकारीले धमाधम बनाउदै छ आकर्षक नमुना बस्ती, कस्ले बुकिङ गर्न पाउने ?
शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ , प्रदेश दैनिक
झापा दमकमा मुख्य कार्यालय रहेको मेची सहकारी संस्था लिमिटेडले नमुना बस्तीको धमाधम निर्माण गरिरहेको छ ।
सहकारीहरु मध्ये पूर्वमा पहिलो पटक मेचीले नमुना बस्ती बसाउने काम गरिरहेको हो । मेची सहकारीमा आवद्ध भएका तर आफ्नो घर नभएका, भाडामा वा अन्य स्थानमा बसिरहेका सदस्यहरुलाई किस्ता बन्दीमा उपलब्ध गराउनेगरी बस्ती निर्माण गरिरहेको संस्थाका कार्यकारी अधिकृत खोम प्रसाद बगालेले बताउनुभयो ।
दमक ४ मा संस्थाले १ बिगाह १६ कठ्ठा जग्गा खरिद गरी बस्ती निर्माणको काम गरिरहेको छ । १ महिना अघिबाट निर्माण सुरुभएको काम हालसम्म कम्पाउण्ड वाल निर्माण सकिनुका साथै, ६ वटा घरको छत ढलाइ गरिसकिएको र २ वटा ढलाइ हुने तयारीमा रहेका छन् । बाँकी घरहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बगालेले बताउनुभयो । सो नमुना बस्तीमा एकै प्रकारका ५२ वटा घर निर्माण गरिने भएको छ ।
बस्तीमा निर्माण भएका घरहरुको मुल्य न्युनतम ४३ लाख देखि अधिकतम ५१ लाखसम्म राखिएको छ । हाल ४२ वटा घर बुकिङ भइसकेको र ३० वटाको रकम समेत जम्मा भइसकेको थापाले जानकारी दिनुभयो । २०७९ साल असार ३० गते सबै घरहरु निर्माण सम्पन्न गरि सदस्यहरुलाई हस्तान्तरण गरिने थापाको भनाइ छ । घरको मुल्य सेयर सदस्यहरुले किस्ता किस्तामा गरेर बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
के छ नमुना बस्तीको विशेषता ?
डेढ तलाको हुने प्रत्येक घरको अगाडिको भागमा सुविधासम्पन्न पार्किङ्ग स्थल, तल्लो तलामा किचन बाथरुम, सिटिङरुम सहितका ३ वटा कोठा र माथिल्लो तलामा २ वटा कोठा रहने छन् । ५२ वटा घरको साइज र रंग पनि एकै किसिमको हुने छ । हरेक घरमा पानी, टेलिफोन, इन्टरनेट सुबिधा सहित, अन्डरग्राउण्ड बिधुत जडान गरिने थापाले जानकारी दिनुभयो । बस्तीका सबै घरमा अनिवार्य फुलबारी, घरको अगाडी पछाडी बिरुवा रोपेर हरियाली बनाइने छ ।
घरको अगाडी ३० फुटको पिच बाटो बनाइने छ भने बस्तीलाई आवश्यक पर्ने सामुदायिक भवन तथा खेल मैदान समेत बनाइने छ । बस्तीलाई सुरक्षित राख्नका लागि मुख्य गेटमा सेक्युरीटि गार्डको व्यवस्था समेत गरिएको छ । बस्तीका सबै घरले आवास सदस्यता लिनेछन् र उनिहरुले आवास समितिले बनाएको आचारसंहिता पनि पालना गर्ने छन् । बस्ती भित्रका संरचनाको मर्मत सम्हारका लागि कोष समेत खडा गरिने छ ।
दमकमा मुख्य कार्यालय रहेको मेची सहकारीका पाडाजुँगी, उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, मिक्लाजुङ, चुलाचुली र बिर्तामोडमा सेवा केन्द्रहरु रहेका छन् ।